Attending international conference in Melbourne Australia - We Love Myanmar
Posted on March 24, 2018 March 24, 2018 by We Love Myanmar
မတ်လ ၂၀ မှ ၂၃ ရက်ထိ ၄ ရက်ကြာ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် ကျင်းပသည့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မြို့ပြစီမ်းလန်းရေး၊ သစ်ပင်ပန်းမံများစိုက်ပျိုးရေး၊ အစည်းအဝေးသို့ နိုင်ငံတကာအစိုးရမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ကြရာ I Love Myanmar မှ ကျမ ဒေါ်လီဗီဆပ်နိုင်ထန်းလည်း မြန်မာပြည်မှ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။
ထိုအစည်းအဝေးတွင် မဲလ်ဘုန်းမြို့ကောင်စီမှ မဲလ်ဘုန်းမြို့ကို စိမ်းလန်းအောင် ထိန်းသိမ်းလာနိုင်သည့်အကြောင်းများကို အဓိကဆွေးနွေးသွားသည်။ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်လာကြသူများသည် မဲလ်ဘုန်းမြို့ရှိ ပန်းခြံများ ပျိုးပင်ခြံများကို လေ့လာခွင့်ရခဲ့သည်။
အစိုးရမှစေလွှတ်သော ပိုလန်နိုင်ငံ၊ တရုတ်နိုင်ငံ၊ တူရကီနိုင်ငံ၊ ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ နယ်သာလန်နိုင်ငံ၊ အီတလီနိုင်ငံ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ကာတာနိုင်ငံ တို့မှ သူတို့နိုင်ငံ၏ မြို့သစ်စီမံကိန်းများ၊ လတာရှည် နိုင်ငံကိုမြှင့်တင်သည် ကုန်စည်ပြပွဲများ ကျင်းပရန် ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကို ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသည့်နှင့်အမျှ အနာဂါတ်တွင် တခြားနိုင်ငံများကဲ့သို့ မိမိနိုင်ငံကို မြှင့်တင်နိုင်သော ရည်ရှည်ကုန်စည်ပြပွဲကျင်းပနိုင်ရန် ယခုကတည်းက ကြိုတင်လေ့လာထားပြီး မြို့သစ်စီမံကိန်းများ ပေါ်ပေါက်လာပါကသော်၎င်း၊ ယခုလက်ရှိမြို့များတွင်၎င်း မြို့ပြစိမ်းလန်းရေးကို I Love Myanmar အနေဖြင့် ယခင်က ပါဝင်ခဲ့သလို ရှေ့ဆက်၍ စိတ်ဝင်စားစွာ ဆက်လက်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း …
This entry was posted in Myanmar and tagged Australia, Green City, Levi Thang, Melbourne.
171 thoughts on “Attending international conference in Melbourne Australia”
Annawar Phyo says:
Mine Nya says:
Thet Suu Htike says:
ဒီ ဒီး says:
မြန်မာနိုင်ငံသူတယောက်အနေနဲ့ ကမ္ဘာအလယ်မှာ ဂုဏ်ယူပါတယ် မရေ အောင်မြင်မူတွေထာဝရပိုင်ဆိုင်ပါစေနော်
Crystina Ko says:
ဆီ မီး ခွက် says:
မမ​ရေ လှလူိုက်​တာ ဘဝမှာ အစစအရာရာအဆင်​​ပြေ​ချော​မွေ့ပါ​စေ
Biak Htin Auk says:
Aye Han Dam says:
ဝန်လာဘာ ခေါ်လို့ မရတဲ့ဘဝ says:
Mawi tuk U Sap te!
Sein Sein says:
မြန်မာ့ သမီး ကောင်းတယောက်ပေါ်ထွက်လာပြန်ပြီနိုင်ငံအတွက် မျှော်လင့်ချက်ကြီးတခုပါဘဲဝမ်းသာလိုက်တာကြိုဆိုပါတယ်
အားပေးစကားအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ တန်ဘိုးထားပါတယ်
Ruth Bawk says:
Thoon Lay says:
ဖွားဖွား လှလှ says:
Nay Htoo Myat says:
အန်တီရေ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါဒယ် မရောက့်ဘူးတဲ့နေရာဒွေ ကိုအမြဲ လိုက့်လွှင့်ပီး တင်နေလို့ အန်တီလဲကျန်းမာပါစေ ခင်ဗျာ
Anty Sint says:
Oo Kyaw Oo Kyaw says:
Kogyilat Kogyilat says:
Ulay Htoo says:
Ppf Sayardaw says:
ပြည်​ပမှာ မြန်​မာ့ကျက်​သ​ရေ​ဆောင်​အမျိုးသမီး
ဖြူဖြူ အောင် says:
ဦး ဇော် says:
Hnin Phyu Win says:
Daw Khin Ohn says:
Daw Nyo Nyo Win says:
လေးစားတယ် သဘောကျတယ် ချစ်တယ်
Deborah ZRem says:
မွန်မ လေး says:
အမရေး မတွေ့ ကြာပီနော် နေမှ ကောင်ရဲ့ လာ အမ
Khin Yu Wai says:
Cin Sawm Tuang says:
Hla MoeSwe says:
A Chit Lay Pyay says:
Shwe Khin Myanmar says:
အကယ် ဒမီ says:
Khin MyatMo says:
Sandy Naw Naw says:
Howaja Tawp says:
မမရေကုန်စည်ပြပွဲအသင်းရှိတယ်နော် .. မမဝင်ရင်တော့တအားပဲ .. pls check through the page here.
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မြန်မာ့စီးပွါးကူးသန်းက ကုန်စည်မြှင့်တင်ရေးနဲ့ ပူးတွဲလုပ်နေပါတယ်ရှင်
Levi Sap Nei Thang ဟုတ်ကဲ့ပါ
Daw Wai Wai says:
OO Myo Nyunt says:
Good idea,you are welcome.
Cherry Iang says:
Na Duh dawt nak cu ….Bawipai duh dawt nak bang tuk asi u…sep te … Bawi pan lo hmang vivo sh law..kan lungawi tuk
Amen ka lungawi
Hla Hla Myint says:
Hnuni Airawn says:
Sapte pawipan na fehnak kipah lo kai hruai vivo seh
Manwenwe Tor says:
Kyaw Myat says:
နေ မင်းခ says:
ကျက်သရေရှိလိုက်တာ I Love Myanmer ဆိုတဲ့အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံ မြန်မာဝတ်စုံ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု ကိုချစ်တဲ့ ညီမလေး ထာဝရရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ
Thithi Mar says:
Mawi tuk aw
Moe Moe Khaing says:
အမရေ မရောက်ဘူးတဲ့နိုင်ငံတွေ အမ လွှင့်ပေးတော့ ရောက်သွားသလိုပါပဲ ကျေးဇူးအထူးပါနော် ပြီးတော့ အရမ်းပိန်သွားပီး အရမ်းလှလာတယ်နော်
မာလာ ခင် says:
Aung Hlu Hlu says:
Zaw Zaw Latt says:
နေကောင်းပါတယ်ရှင် … အခုတော့ အိမ်ရောက်ပါပြီ
Salai Herh says:
Khatawk khua ah ka sungte pawl an um hokhaw. Victoria veng Emanuel churh ah hihii
aww cumi biak inn ah ka feh
Aye Mya Mya says:
Daw Htoi says:
ဟုတ်ကဲ့ ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ
မြန်မာ ထမီ ဝတ် ထား တာလား မမ
Lynn Twentynine May says:
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ရပါစေ
Yenaing Yenaing says:
Good အစ်​မ အရင်​လူ​တွေလက်​ထပ်​က မြန်​မာပြည်​ကိုကမ္ဘာ့အညံ့ဆုံးဖြစ်​​အောင်​လုပ်​သွားတာ အထူးသဖြင့်​အစ်​မတို့ချင်းပြည်​နယ်​ကို​ပေါ့ ပြည်​နယ်​အားလုံးထဲမှာ ချင်းပြည်​နယ်​အဆင်းရဲဆုံးပဲအစ်​မ ခုမ အ​မေစုလက်​ထပ်​​ရောက်​မှ ချင်းပြည်​နယ်​ နဲနဲတိုးတက်​လာတာ
KO Ohn says:
လုံးလုံး ဝါ says:
Thun Thun Tikir says:
Mawi rori bak ko♥♥♥♥♥
Daw Yi says:
Saw Kyi Phyu says:
Falam Kapte says:
The most beutiful in the world.
Ahji Tsin says:
Mee Mee KyawWin says:
Htay Thaung says:
ဂုဏ်ယူပါသည် I love Myanmar ပိုမိုအောင်မြင်ပါစေ
Sun Tun Kyaw says:
Gapk Taang says:
That right ideas, Levi Sap Nei Thang.
Aye Myat Swe says:
Obed Nu says:
Bawipa in lo cawisaang sin sin seh law
Daw Lailaimu says:
Waya Zain says: